Taariikh / dulmar guud
Thanks to hoggaanka iyo maalgalinta ee Kooxda Green Bay Rotary Club, "Caafimaadka Ilkaha, Caruurta Caafimaadka leh," xarun caafimaad oo guur-guurta, oo ku taal dugsiga (barnaamijka ku saleysan dugsiga) ayaa la sameeyay 2005. Iyadoo lala kaashanayo qorshahan, iskaashiga Caafimaadka Afka ( OHP) waxaa loogu daray sidii faa'iido-doonnimo 2007 si loo sii wado shaqadii ay bilaabeen Naadiga 'Green Bay Rotary Club'. Sanadkii 2007, OHP waxay xarunteeda koowaad ee xarun ilkeed oo joogto ah ka furtay Xarunta Kheyraadka Howe waxayna sii waday inay sii ballaariso furitaanka xarun caafimaad oo laga furo Salvation Army Kroc Center sanadkii 2011. Bishii Janaayo 2017 iyadoo ay ku deeqday deeq ballaaran oo ka timid Delta Dental of Wisconsin, OHP waxay furtay xarunteeda caafimaad - OHP West - dhinaca galbeed.
Ilkaha Caafimaadka qaba, Ilmaha Caafimaadka qaba
Naadiga 'Rot Bay Downtown Rotary Club', oo kaashanaysa OHP, waxay aasaastaa barnaamijka "kulka caafimaadka, carruurta caafimaad qabta" ee ku saleysan dugsiga. Mobaylka, kooxda ilkaha ee dugsiga waxay ka shaqeeyaan laba maalmood usbuuciiba Dugsiyada Dadweynaha ee Green Bay, iyagoo adeegsanaya tabaruca ilkaha iyo shaqaalaha.
Head Start foloraydh varnish iyo barnaamijyada sealant-ka dugsiga dhexdiisa ayaa la sameeyay.
Heerka aan macaashka ahayn
OHP waxay noqotaa 501c (3) urur aan macaash doon ahayn. Deeqda horumarinta caafimaadka afka ee Gobolka Wisconsin waxay bixisaa maalgalin taas oo u saamaxeysa OHP inay dhammaystirto ballamo ilkeed oo dheeraad ah oo ah 2,400.
Xarunta Maamulka Dhexe ee OHP waxaa lagu aasaasay Xarunta Caawinta Ganacsiga NWTC. OHP waxay ku bilaabaysaa daweynta dadka waaweyn ee naafada ah ee ASPIRO. OHP waxay xarun caafimaad oo ilkeed oo joogto ah ka fureysaa Howe Community Resource Center.
Duuliyaha barnaamijka cadayga ilkaha ee labada iskuul. Adeegsiga qolka qalliinka ee St. Vincent Hospital, OHP waxay aragtaa bukaankeeda baahiyaha gaarka ah ee ugu horreeya.
Rugaha Caafimaadka Gudaha
OHP waxay xarun caafimaad oo joogto ah ka dhex furaysaa iskuulada hoose ee Fort Howard iyo Sullivan.
Xarunta Kroc Center
OHP waxay xarun caafimaad oo saddex-kursi ah ka furaysaa Kroc Center oo shaqeyneysa lix maalmood usbuucii, taas oo u oggolaaneysa kordhinta 86% ballamaha la bixiyo. Deeqda Wisconsin DHS waxay u oggolaaneysaa OHP inay ballaariso barnaamijka-saldhigga dugsiga iyadoo la abuurayo xarun caafimaad oo ku-meel-gaar ah oo ku yaal Nicolet, Sullivan, iyo Fort Howard Schools.
Ballaarinta Goobaha Joogtada ah
OHP hadda waxay leedahay 4 goobo xarun caafimaad oo joogto ah iyo 19 goobo dayax gacmeed oo ku yaal Brown County; iyagoo siinaya in kabadan $ 4.5 milyan adeegyo ah 11,000 bukaan ah oo jira iyo 2000 bukaan cusub ah sanadkii.
OHP waxay fidisaa da'da carruurta loo adeego da'da hal illaa 18 sano. Adeegyada loo heli karo carruurta u qalma ee ku sugan Brown County.
OHP waxay ku fidaysaa dugsiga dhexe ee Washington, waxay kiraystaa dhakhtar ilko oo loogu talagalay soo saarista molar ee saddexaad, waxay ballaarisaa Xarumaha Ilkaha ee Howe, waxayna kordhisaa adeegyada si loogu daro orthodontics xaddidan.
Kiisaska Cisbitaalada Dheeraad ah
OHP waxay aragtaa koror 20% ah oo ku saabsan kiisaska isbitaallada, oo dhameystiraya daaweynta gudaha cisbitaalka hoostiisa suuxinta seddex maalmood usbuucii.
OHP West ayaa Furan
OHP waxay ka furaysaa dhinaca galbeed dhinaca 2247 Fox Heights Rd. iyadoo la kaashanayo Delta Dental iyo kuwa kale si loogu adeego caruur badan oo ku taal dhinaca galbeed ee Green Bay.